Vorontsiloza - ALinks
Lahatsoratra momba an'i Torkia
Ahoana ny fomba hanokafana kaonty amin'ny banky any Ankara?
Enga anie 6, 2022 Demi Ankara, Banks
Afaka manokatra kaonty banky any Ankara ianao raha mipetraka any. Ny Karatra Kimlik Tiorka (ID) na karatra fonenana, faktiora rano, jiro, na entona amin'ny anaranao, ary karatra SIM Tiorka dia tsy maintsy manomboka
Ahoana ny fomba hanokafana kaonty amin'ny banky any Istanbul?
Enga anie 5, 2022 Demi Banks, Istanbul
Azonao atao ny manokatra kaonty amin'ny banky amin'ny iray amin'ireo banky any Istanbul. Ny Karatra Kimlik Tiorka (ID) na karatry ny fonenana, ny faktiora rano, jiro, na entona amin'ny anaranao, ary karatra SIM tiorka dia tsy maintsy manomboka.
Visa Tiorkia ho an'ny teratany Singapore
Aprily 17, 2022 Demi vorontsiloza, visa
Hotely mora indrindra any Istanbul, Torkia
Janoary 16, 2022 Shubham Sharma trano fandraisam-bahiny, Istanbul, Travel, vorontsiloza
Tiorka dia mampientam-po sy mampiala voly. Raha mieritreritra ny handeha ho any amin'ity firenena mahafinaritra ity ianao, dia manomana ny trano fonenanao aloha. Betsaka ny toerana mora any Torkia izay mety tsara ho an'ny mpandeha tetibola. Na mifidy hotely na villa ianao
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Istanbul? Torolàlana ho an'ny vahiny sy ny olona tiorka
Janoary 10, 2022 Demi Istanbul, asa
Raha efa manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, na Tiorka na Siprisy Tiorka dia azonao atao ny midina mijery ny fomba hahitana asa any Istanbul. Raha tsy manana fahazoan-dàlana hiasa ianao, ny zavatra voalohany dia ianao
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Ankara?
Aogositra 29, 2021 Shubham Sharma Ankara, asa, vorontsiloza
Izay manana visa miasa na Tiorka Tiorka na Tiorka Tiorka dia afaka midina mijery ny fomba hahazoana asa any Ankara, iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra eto amin'ny firenena amin'ny fidinana an-tongotra. Voalohany indrindra, raha ianao
Visa any Torkia avy any Mexico
Aogositra 27, 2021 Shubham Sharma Meksika, Travel, vorontsiloza, visa
Ilaina ny fahazoana visa, alohan'ny hidirany amin'ny Repoblika Tiorka. Raha manana visa Schengen, UK, Canada, Japan na US ianao na mponina amin'ny iray amin'ireo firenena ireo ianao
Ahoana ny fomba hahazoana visa ho an'i Torkia avy any Afrika Atsimo?
Aogositra 4, 2021 Demi Africa, mandehana, vorontsiloza, visa
Afaka mahazo visa avy any Afrika atsimo mankany Torkia ianao amin'ny vavahady sisintanin'i Torkia (fantatra koa amin'ny hoe Visa on Arrival). Ny olona avy any Afrika atsimo dia afaka mahazo e-Visa an-tserasera ao amin'ny Rafitra Fampiharana Visa Tiorka. Izay mandeha any Torkia